Xaafado ceeb awgeed magacyada isaga baddalaya - BBC News Somali
Image caption Gabar kamid ah kuwa ku nool xaafadaha doonaya in magaca laga badelo
Dadka ku dhaqan xaafado "magacyo laga yaxyaxo leh" oo ku yaalla gobollada Haryana iyo Rajasthan ee dalka Hindiya ayaa u xusul duubanaya in la baddalo magacyadaas oo sannado fara badan ay dhibsanayeen. Wariyaha BBC-da ee gobolka Punjab Arvind Chhabra ayaa la hadlay qaar ka mid ah dadka hor kacaya ol'olahan.
"Xaafaddeyda magaceeda waxaa la yiraahdaa Ganda [oo micnaheeda marka luuqadda Hindiga laga soo turjumo uu noqonayo Wasakh ama foolxumo]", erayadaas waxay ku qornaayeen warqad ay haweeneyda lagu magacaabo Harpreet Kaur sannadkii 2016-kii u dirtay ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi.
"Xaaladdu aad bay u xumeyd, waxayna gaartay heer ay xitaa qaraabaddeenna nagu aflagaadeeyaan", ayey tiri.
Sannadkii 2017-kii ayuu Mr Modi ku amray mas'uuliyiinta iney baddalaan magaca xaafaddaas.
"Markii ay taasi shaqeyn weyday, waxaan ku fikirnay in haddii qof dhallinyaro ah uu warqad u qoro Mr Modi ay suurta galeyso ujeeddadeenna".
"Ma jirin hal qof oo ku sugnaa xaafadda, oo aan dooneynin in la baddalo magaca xaafadda", ayuu yiri.
Mid ka mid ah mas'uuliyiinta dalka oo halkaas booqday musiibada fatahaadda ka dib ayaa sheegay in dhammaan meel walba oo uu daadka maray ay noqotay wasakh ama "ganda", isla markiina waxaa xaafadda ku dhagay magacaas.
Mr Ram ayaa intaas ku daray in magaca xaafadda uu xitaa sababay in laga guursan waayo halkaas, maadaama ay ceeb tahay in meel wasakh lagu magacaabo laga soo guursado ama aroos lagu dhigto. "Hadda waxaa si fiican nooga fuqday neefta", ayuu yiri.
Image caption Tabeelo ku xardhan mid kamid ah magacayada xaafadaha
Sababaha way kala duwan yihiin - xaafadaha qaar ayaa magacyadooda loo arkay kuwo cunsurinimo ah, qaarna waa erayo aflagaaddo ah oo aan ku habooneyn bulshada oo ceeb u soo jiidaya.
"Codsiyada ilaa 40 xaafadood ayaa la aqbalay isla markaana waa la hirgaliyay", ayuu yiri Krishan Kumar, oo ah sarkaal sare oo ka tirsan dowladda federaalka.
Kuwaas waxaa ka mid ah xaafad lagu magacaabi jiray Kinnar oo micnaheedu marka luuqadda Hindiga laga soo turjumo uu yahay "qof dareenkiisu uu yahay jinsiga uu ku dhashay mid ka duwan".
Image caption Tareen dhexmara mid kamid ah xaafadaha
Hase ahaatee nidaamka loo marayo in xaafad laga baddalo magaca ma aha mid sida loo maleynayo u sahlan. Waxaa laga billaabayaa dowlad goboleedka, markii lagu qanciyo in magaca uu baddal u qalmo ka dib ayaana loo gudbinayaa dowladda federaalka, oo ka gaari karta go'aanka kama dambeysta ah.
Laakiin inta aysan ku dhawaaqin go'aanka ugu dambeeya, waa iney wada tashi la sameeyaan oo ay oggolaansho ka helaan hay'adaha kala duwan ee ku shaqada leh.